फरार कैदी भेटिएनन् : भागेका की भगाइएका ? - Khabar Muluk
फरार कैदी भेटिएनन् : भागेका की भगाइएका ?
चितवन । चितवन कारागारबाट गत मंसिर ११ गते भागेका कैदी हालसम्म भेटिएका छैनन् । पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कालिका नगरपालिकाका रेशमलाल श्रेष्ठ मंसिर ११ गते बेलुकी ५ः३० बजेका समयमा जिल्ला कारागार भरतपुरको पर्खाल नाघेर भाग्न सफल भएका थिए । उनी जर्वजस्ती करणी मुद्धामा पुर्पपक्षका लागि कारागार चलान भई आएका थिए ।
दिनभर वाहिरको काम सकेर साँझ भित्र पस्ने बेलामा कैदी संख्या गन्ती गर्दा एक जनाको संख्यामा कमी आएपछि उनी भागेको पत्ता लागेको थियो । कारागारको १५ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर कैदी भाग्नु सामान्य कुरा होइन । यसले कारागार भित्रको सुरक्षा व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
कारागार प्रशासनका अनुसार, सीसीटिभी फुटेजका आधारमा कैदी बेलुकी ५ बजेर ३३ देखि ३४ मिनेटको समयमा भागेको देखिन्छ । उनी कारागारको मुख्य गेट देखि १० मिटरको दुरीबाट मात्रै हाम्फालेर भागेको सीसीटिभी फुटेजमा देखिएको छ । यसबाट सुरक्षा निकायको कमजोरी मात्रै होइन कतै सुरक्षा निकायकै व्यक्तिहरुको संलग्नता त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
भागेका कैदी एक सातासम्म पनि नभेटिनुले चितवन प्रहरी प्रति जनताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
कारागारभित्रको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै नीज भागेकै समयमा ड्युटीमा रहेका २ प्रहरी जवानहरुलाई निलम्बन गरी छानविन गरिरहेको चितवन प्रहरीका प्रमुख नान्तीराज गुरुङले बताएका छन् । उनले भने,“निलम्बनमा परेकाहरुसँग घटनाका बारेमा सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ र भागेको कैदीको व्यापक रुपमा खोजी भइरहेको छ । ”
कैदी भागेपछि सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो । अध्ययन अनुसन्धान उसले आफ्नो पछि प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ ।
यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खवरमुलुकसँग भने,“प्रतिवेदन हामीले बुझेका छौँ । सुरक्षा संयन्त्र कमजोर देखियो । त्यसैले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न हामीले भनेका छौँ ।” उनले भने, “हामी यो भन्दा बाहेक अन्य विषयहरुमा पनि गहन अध्ययन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रकृयामा छौँ ।”
प्रकाशित मिति : मंसिर १८, २०७७, बिहीवार १०:२५ बजे